HTML Email Dhizaini Mienzaniso Uchishandisa Mhuka
Uchishandisa Mhuka mune Yako Email Kushambadzira
Chipiri, Gunyana 20, 2009 Svondo, October 4, 2015 Scott Hardigree
Zvagara zvichinzi kugadzira HTML-based email muna 2009 kwakafanana nekugadzira peji rewebhu muna 1999. Zvinosuruvarisa asi ichokwadi. Iko kukodha ndekwechinyakare uye, zvichienzaniswa neazvino webhu 2.0 inoshanda, zvikanganiso zvakakura.
Saka kana vatengesi veemail vachida kuratidza kufamba, kutyaira kutaridzwa kwekutungamira uye kufona-kune-chiito ivo vanoshandisa animated maGIF. Pamberi peFlash, yakapusa GIF mifananidzo yaive rairo yezuva.
Kushandiswa kwehupenyu hweimeri kuri kuwedzera. Unobvunzirei?
Mhuka dzeGIF dzakatsigirwa-dzakatsigirwa nevakuru email vatengi uye webmail nzvimbo
Inobatsira vatengesi kumira pakati pevanhu
Zvinotonyanya kukosha, zvinoita kunge zvinoshanda!
Yakasimba ROI neMhuka
Izvi zvichangopfuura A / B bvunzo neBlueFly yakawana yeanemail kudhonza mu12% yakawanda mari kupfuura iyo isina-animated yakaenzana. Saizvozvo, izvi nyaya yokudzidza paKushambadzira Sherpa, Lake Champlain Chocolates yakawana kuwedzera kwekutengesa kwe49% paKisimusi maererano nemushandirapamwe unoshandisa maGIF ane hupenyu uchienzaniswa nemushandirapamwe wegore rapfuura.
Kunyangwe Mamwe Makomborero
Chekutanga, vashambadziri vanogona kushandisa diki diki yenzvimbo kuratidza zvigadzirwa zvakawanda, zvakakosha kupa, kana kufona-kune-chiito, pamwe nekuwedzera kudzvanya-kuburikidza nemitengo kune mavhidhiyo akatambirwa. Vatengesi vakangwara vanogona zvakare kushandisa ehupenyu kukurudzira kusimudzira mune akasarudzika marefu (kana akatwasuka) maemail.
Nyaya inowirirana inoenderana ndeyekuti maemail ane hupenyu anopa sei muAptlook 2007. Ndiko kuti, chete furemu yekutanga yeiyo animated maGIF inoratidzwa. Saka iwe uchazoda kutaura meseji yako mune yekutanga furemu, zvingangoitika. Iwe zvakare uchada kugara uchiziva kuti saizi yeiyo animated GIF (mune kilobytes) inogona kukanganisa zvakashata kumhanya uye kurongeka uko mifananidzo yako inoratidzwa.
Dana-ku-Chiito Mienzaniso: Banana Republic, Lexus, Piperlime
Chigadzirwa Showcase Mienzaniso: Kuguma Kwenyika, Art.com
Yakafananidzwa Vhidhiyo Mienzaniso: rukungurima
Zvimwe. Mashandisiro Mienzaniso: Norm Thompson, Aeropostale
Nenzwisiso yakasimba yezvinangwa zvako uye ruzivo email mugadziri iwe uchakwanisa kuwedzera kudzvanya-kuburikidza uye shanduko mitengo uchishandisa kuchangamuka.
Tags: Animatedanimated gifkuchangamukaemail mifananidzo
Zvikuru Zvikuru zvinoshanduka nekufamba kwenguva
Consumer Nyowani yeMedia Usage Yekudzidza Yakaburitswa